Kuwait Airways: Mgbasa ụgbọ mmiri na nzụta asatọ A330neo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Kuwait Airways: Mgbasa ụgbọ mmiri na nzụta asatọ A330neo
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Kuwait Airways, onye na-ebu mba nke steeti Kuwait, abịanyela aka na nkwekọrịta ịzụta (PA) maka ụgbọ elu asatọ A330-800. Yousef Al-Jassim, onye isi oche Kuwait Airways na Christian Scherer bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ n'isi ụlọ ọrụ Airbus na Toulouse.
Yousef Al-Jassim, Onye isi oche Kuwait Airways kwuru, sị: “A330-800 ga-abanye na ntanetị mgbasa na atụmatụ uto anyị. Ya ghara imeri emeri akụnụba na arụmọrụ na mgbakwunye na nke kacha mma na klas njem nkasi obi na-eme ka ọ bụrụ ụda ego. Obi siri anyị ike na A330-800 ga-akwado anyị ka anyị sọọ mpi nke ọma na ntanetị na-agbasawanye. Mmekọrịta anyị na Airbus gbasoro nnweta nke ụgbọ elu ma anyị na-atụ anya inwekwu mmekọrịta na ngalaba teknụzụ.
Nkwupụta a gosipụtara ọkwa dị mkpa na atụmatụ ịgbatị ụgbọ mmiri na mgbasawanye nke Kuwait Airways. Onye ụgbọelu mba nke Kuwait nwekwara A350 XWB na A320neo Family ụgbọ elu na iji. Nnyefe nke ụgbọ mmiri ọhụrụ Airbus ga-amalite na 2019.
“Obi dị anyị ụtọ na Kuwait Airways ahọrọwo A330neo dị ka isi nkuku nke ọdịnihu ya widebody nsoro. A330-800 na arụmọrụ ya na arụmọrụ ya pụrụ iche ga-akwado ebumnuche nke onye ọrụ ahụ iji zụlite netwọkụ ogologo ya na-agbasawanye, "ka Christian Scherer, onye isi ụgbọ ahịa Airbus kwuru. "Thegbọ elu ahụ ga-agbakwunye Kuwait Airways 'A320neos na A350 XWBs nke ọma ma nyefee akụnụba na-arụ ọrụ anaghị arụ ọrụ, arụmọrụ zuru oke yana ahụmịhe ndị njem na-enweghị atụ."
Amalitere na July 2014, ezinụlọ A330neo bụ ọgbọ ọhụrụ A330, gụnyere nsụgharị abụọ: A330-800 na A330-900 na -ekere 99% nkịtị. Ọ na-ewulite na akụnụba enwetara, egosipụta na ntụkwasị obi nke A330 Family, ebe ịbelata oriri mmanụ site na ihe dịka 25 pasent kwa oche na ndị asọmpi ọgbọ gara aga na ịbawanye ụba site na 1,500 nm ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ A330s na-arụ ọrụ. The A330neo bụ nke Rolls-Royce nke ọhụụ ọhụụ Trent 7000 nyere ya ma gosipụta nku ọhụụ ọhụụ ya na ọnụọgụ A350 XWB ọhụụ. Lọ ahụ na-enye nkasi obi nke ihe eji enyere ndụ aka.
A330 bụ otu n'ime ezinụlọ ndị kachasị ewu ewu na-ewu ewu kemgbe ha natara iwu karịrị 1,700 n'aka ndị ahịa 120. Ihe karịrị 1,400 A330s na-efe efe karịrị ndị ọrụ 120 n’ụwa niile. The A330neo bụ ọhụrụ mgbakwunye na-eduga Airbus widebody ezinụlọ, nke na-agụnye A350 XWB na A380, niile na-egosi na-enweghị atụ ohere na nkasi obi jikọtara na-enwetụbeghị ụdị arụmọrụ etoju na-enweghị atụ nso ike.